Khabiirka Cilmiga ah ee Hurgunka, Hagaajinta Ammaanka iyo Waxyaabaha Badbaadada Xambaarsan
Malware (ereyga loogu talagalay barnaamijka malawadka) waa codsi loogu talagalay in lagu geliyo ama la dhibaateeyo PC haddii uusan maqnaanshahaaga. Xakameynta waxaa ka mid ah Gooryaanka, infakshanada PC, Dhibaatooyinka Trojan, Spyware, Dhibaatada iyo Taasi waa calaamadda jilbaha. Waxaa laga heli karaa boggaga iyo farriimaha ama lagu daboolay dukumintiyada la qaadi karo.
Habka ugu fiican ee looga fogaado helitaanka wasakhaysan waa in la kiciyo cadaawad hufan si loo xakameeyo barnaamijka ilaalinta, u samee wax soo saarka taraafikada, iska ilaali inaad gasho xiriiryada email ama goobo shaksi ah. Noqo, maxaa yeelay, waxaa laga yaabaa, inay farshaxan yahiin caqabado badan: hadda iyo ka dibna xaasidnimadu waxay u egtahay mid maskax ahaan u eg masruuf ka yimid saaxiib ama goobta waxtar leh. Xaqiiqdii, xitaa kuwa ugu taxaddar badan ee isticmaalayaasha webka ayaa laga yaabaa inay helaan fayrasyo ​​goor hore ama ka dib.
Fursadaha aad ka baxsan tahay, waxaa jira barnaamijyo fara badan oo bilaash ah oo lacag la'aan ah oo la heli karo si ay kuu suurtogasho inaad ka baxdo. Igor Gamanenko, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Semt , wuxuu liis-gareynayaa dhowr meelood
Adigu waxaad daalacaneysaa, iyo dhammaan gaajo si aad u muuqata shaashad muuqaal ah oo muuqata oo kuu sheegaysa in ay jiraan arrin ku saabsan PC-gaaga, tusaale ahaan, 'PC-gaaga ayaa laga yaabaa inuu ku sumoobo codsiyada casuumada leh. Baahida loo eryey ayaa loo baahan yahay. Si aad u eegto, riix 'Haa' Ma ogtahay in ay dhab tahay ama aaney ahayn, habkee ayaad ku dhaqmaysaa? Daacadow, tani waxay noqon kartaa mid dhib badan.
Waxay kormeereysaa shaashadaha waxayna soo uruurisaa xogta ku saabsan adiga, PC-gaaga iyo sidoo kale waxyaabaha aad u malaynayso adiga oo aan adigu ogolaan- inta badan, si aad u dhiirrigeliso ujeedooyin. Waxay sidoo kale ku ururin kartaa xogta cinwaankaaga iyo xitaa ereyada muhiimka ah.
Arjiyada khaladka ah ee isdabajoogaayo iyo isku dayi kara PC-yada kala duwan
BARNAAMIJKA LACAG LA'AAN AH
Barnaamijyada la socda waxay si joogta ah uga soo baxayaan aragga, ka ilaalintaada PC-gaaga wasakheynta
Barnaamijka antivirus oo bilaash ah oo lagu hayo lid ku ah barta casriga ah, ee la dagaallanka rootkit iyo istiraatajiyad adag.
Ka hortagida codsiga Cudurada Grisoft oo si dabiici ah u ilaalisa PC-yada infekshannada iyada oo siinta xogta macluumaadka infekshanku ku wargeliso iyo amniga.
Nabadgalyada Amniga Microsoft
Waxay siisaa nabadgelyo joogta ah ee kombuyuutarka kaa ilaaliya caabuqyada, hindhistaha, iyo codsiyada malawiga kala duwan.
Ka dhig qaybta badbaadsan ee kombuyutarkaaga si aad u hesho shabakad nabadgelyo leh codsigan bilaashka ah. Tani waa qalab aan caadi ahayn oo loogu talagalay macaamiisha kale ee la horumariyey.
Si aad u bilawdo, hubi inaad soo bandhigto barnaamijkii ugu dambeeyey ee dib u soo celiya qaab-shaqeedkaaga. Kuwani waxay had iyo jeer ku darsadaan amniga iyo xaqiijinta wixii la hubo si ay u caawiyaan hubinta qalabkaaga. Nadiifin rasmi ah? Rixee.
BILAASHADA BIXINTA / Qalabka Nadaafadda
Codsiyada la socda waxay baaritaan ku sameeyaan qaab-dhismeedkaaga khayaanada, khashkhashaad kasta oo uu soo ogaado
Qalabka lacag la'aanta ah ee lacag la'aanta ah ee lacag la'aan ah oo sidoo kale qaadata tallaalka rootkits, Gooryaanka, Spyware, dulin, iyo adware Source .
Nidaam lagu qadariyo oo lagu guuleysto oo aqoonsata oo ka saaro dhibka iyo khatarta ka iman karta PC-gaaga